HomeWararka SomaliyaGalmudugDagaalka Dhuusomareeb oo Xoogeestay, Hub Culus oo laga Maqlayo Magaalada, Ciidanka GorGor oo ku biiray
May 13, 2022 Galmudug, Wararka Maanta, Wararka Somaliya 0
Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in dagaalkii u dhexeeyay ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlusunna ee saaka ka dhacay halkaasi uu sii xoogeystay.
Rasaas culus iyo weeraro ayaa laga maqlayaa magaalada Dhuusamareeb oo saaka ku waabariistay jawi colaadeed ka dib markii ay weerar ku qaadeen xoogaga Ahlusuna ee ku sugnaa deegaanka Bohol.
Ciidamada ATMIS ee ka socda Jabuuti iyo kuwa Gorgor ee dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ku biireen dagaalka, iyagoo ciidamada difaaca Galmudug ee difaacaya magaalada.
Madaafic hoobiyeyaal ah ayaa la soo sheegay inay ku dheceen waddooyinka qaar, iyaga oo aan la ogaan karin ka dhashay, waxaan cabsi iyo dagaal uu soo wajahay shacabka ku nool magaalada oo ka murgisan ka soo gaari karta hubka la isku qabtay.
Waxaa gabi ahaanba hakad ku jira noocyada ganacsiga iyo socodka dadka iyo safarka, jawi colaadeed ayaa lagu sameeyay saameeyey, booneysi maqrib iyo shacabka